Wasiiradii dowlada ee tagey kismaayo oo waji gabax kala kulmey ciidamada Kenya, caawana ku hoyday Airport Kismaayo – idalenews.com
Wasiiradii dowlada ee tagey kismaayo oo waji gabax kala kulmey ciidamada Kenya, caawana ku hoyday Airport Kismaayo
Wafdigii uu hogaaminayay Wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya C/xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi oo ay wehliyeen Wasiirada Cadaalada iyo Warfaafinta iyo saraakiil ciidan ayaa wali u suura gelin inay gudaha u galaan magaalada Kismaayo.
Sida ay sheegayaan wararka wafdiga ayaa caawa ku hoyanaya garoonka diyaaradaha Kismaayo, iyadoo weji gabax kala kulmay ciidamada Kenya markii ay u sheegeen in aanay ammaankooda damaanad qaadi karin, hadii gudaha u galaan magaalada.
Wararka qaar ayaa sheegaya in wafdigan Wasiirka gaashaandhiga loo diiday inay soo galaan magaalada, taasoo keentay inay ku negaadaan garoonka diyaaradaha Kismaayo oo aanay soo dhaafin.
Saraakiisha Ciidamada dowladda ayaa ka carooday hadalka Ciidamada Kenya ee ah in aanay amaankooda damaanad qaadi karin, waxaana hadalkaas uu durba shaki geliyay wafdiga Wasiirka gaashaandhiga hogaaminayo.
Ujeedka safarka Wasiirka gaashaandhiga iyo wasiirada kale ayaa la xiriira sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa ciidamada dowladda ee ku sugan Kismaayo, kuwaasoo uu is bar bar yaac ka dhex jiro, isla markaana aanay laheyn dareyso lagu garto.
Taliyaha ciidamada xooga dalka iyo kuxigeenkiisa ayaa maalmihii u dambeeyay ku sugnaa garoonka Kismaayo, waxaana qudhooda lagu wargeliyay in aanay gudaha u geli karin Kismaayo, markii lagu eedeeyay inay saanad hub iyo dareys milateri u wadaan ciidamada dowladda ee Kismaayo ku sugan.
Afhayeenka Maamulka KMG ee Kismaayo C/naasir Seeraar ayaa sheegay in aanay ka war heyn wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo soo gaaray Kismaayo, isla markaana aan lagu soo wargelin.
Shalay ayay aheyd markii Axmed Madoobe uu ku eedeeyay dowladda Soomaaliya inay wafdiyo iska soo daba dirto, isla markaana aanay ku soo wargelin, dhowr wafdi ay Kismaayo isaga soo daba laabteen.
Xaalada Kismaayo ayaa caawa degan, iyadoo maanta uu ka dhacay banaan bax looga soo horjeeday dowladda Soomaaliya, waxaana la ogeyn xaalada magaalada sida ay ku dambeyn doonto, iyadoo marba marka ka dambeysa uu cirka isku shareerayo xiisada siyaasadeed ee Kismaayo ka taagan.
sarkaal ka tirsan raaskanbooni ayaa sheegay in ay u diideen wasiirada in ay u galaa kismaaya gudaha